W H A T H U R T S T H E M O S T
Labels: မြတ်မြတ်နိုးနိုး ကဗျာ, မြန်မာ
မကြားချင်ဘူး ကြားနေတယ် ..။
တချို့ အပြစ်တွေမှာ မပစ်နိုင်တာတွေ ပါတယ် ..။
တဇောက်ကန်း ယုံကြည်ချက်တွေ ပါတယ် ..။
အန္တာရယ်များတဲ့ လောကကြီးကို အန်တုခြင်းတွေ ပါတယ် ..။
မနေနိုင်မထိုင်နိုင် အဲ ဇာတ်ခုံမှာ ကမိတော့
ငါက ပြိုင်ဘက်ကင်း ငမိုက်သားပဲ ...။
ကျေးဇူးပဲ လောကဒါဏ် ..
ဘယ်တော့မှ မရိုးအီတဲ့ ရိုက်ချက်တွေ အတွက်
ဒီနှစ် အကယ်ဒမီလည်း ခင်ဗျားပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ် ..။
နှစ်ထောင့်ဆယ့်တစ်မှာလည်း ဆက် တစ်ဦးမှာပေါ့ ..
ဘာမှ စိတ်ပူစရာမလိုဘူး ...
အချစ်နဲ့ ပေါင်မုန့်မရှိလည်း ...
ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ဘ၀ကို ရောင့်ရဲနေလိုက်လို့ ရတယ် ..။
ဒါက စိတ်ရှုပ်လို့ ရေးတဲ့စာ ...
ရီရင်လည်း ရီ.. ငိုရင်လည်း ငို..
ရင်ထဲမှာ ဘာမှန်းမသိတဲ့ အရာတွေ ဘာတစ်ခုမှ
တွန်း ဖယ် ထား တယ် ..
ခဏလောက် ငါ့ကို ရုန်းထွက်ခွင့်ပေး ..။
အိပ်မက်တွေလည်း မကောင်းတာ ကြာပြီ ...
မကောင်းတာတွေ မမက်အောင် မအိပ်ရရင်ကောင်းမှာပဲ
စစ်ထဲပဲ ၀င်ရမလား
စစ်မှုပဲ ထမ်းရမလား ..
၅ သိန်းတန် ဖုန်းဝယ်ရမလား ..
၃၁ စီးရမလား ..
ေ-ာက်အမျိုးမျိုးပြောထားတဲ့ Billboard တွေကိုပဲ
ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ဆဲနေမိတယ် ... ။
Labels: s u m mer p oem, ခံစားမိသမျှ
Posted by summer at 3:56 AM
Labels: s u m mer p oem, ခံစားမိသမျှ, မြန်မာ
မိုးရာသီ အရိုင်းတေး ..
သည်းသည်းမည်းမည်း ရွာချလာတဲ့ မိုးစက်တွေထဲမှာ...ဘယ်နတ်ဆိ
ုးရဲ့ ကျိန်စာမျိုးနဲ့ နာကျည်းချက်တွေပါနေမလဲ...။
မေ့လွယ်ပျောက်လွယ် နေ့ရက်တွေထဲ အိပ်မက်အသေတွေနဲ့ တုတ်နှောင်ခဲ့တဲ့ မှော်ဆရာရေ.... ကံကြမ္မာဆိုးတွေကိုချည်း တနင့်တပိုးလက်ဆောင်ထားခဲ့တာ ကျေးဇူးတင်မဆုံးဘူး..။
ခင်ဗျား နှင်တံတချက်အဝှေ့မှာတင် မှိုင်းရီ မှုန်ဝါး အုံ့ဆိုင်းခဲ့ရတာ...။ ကျုပ်တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ထစ်ချုန်းရွာတဲ့ မိုးလေလားလို့ မေးပစ်ချင်တယ်...။
အနားသတ်မရှိတဲ့ စိတ်မိုက်ကို ဘောင်ခတ်ထားပစ်နိုင်တဲ့ ခင်ဗျားအပြုံးမှာ ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း ရွာရန်ရာနှုန်းအပြည့်နဲ့ ပြိုဆင်းချင်နေတော့လည်း ခက်သားလား ...။
တွေတွေ ငေး ငေး..တွေတွေငေးငေး.. ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းကိုယ်ကိုက် နာကျင်နေပလိုက်တယ် ..
သြော် ..၀မ်းမနည်းကြေးလို့ ဆိုခဲ့ကြပေမယ့်လည်းလေ...။ အယောင်ယောင်အမှားမှားနဲ့ မိုးထဲမှာတောင် မိုးထပ်ရွာတယ် ...။ ကျေးဇူးပြုပြီး အောက်စီဂျင်ပါတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ပဲ ကြည့်ပါ..။
ဒါနဲ့ ခင်ဗျားပေးတဲ့ အလင်းတွေက တဆိတ်လောက် မကြမ်းလွန်းဘူးလား...အမှောင်ထဲမှာတောင် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် လောင်ကျွမ်းလွန်းတယ်..။ အရိုင်းဆန်ဆန်နဲ့ ဗြောင်းဆန်အောင် ကြေကွဲနေရတာတာ... ကြေကွဲနေရတာ....။ ပြောင်းပြန်ကြီး ရီနေရလွန်းလို့လည်း နှလုံးခုန်သံစည်းချက်တွေက ကစဉ့်ကလျားနဲ့ ..အောင့်သီးအောင့်သက် ...။ ဘာတွေဖြစ်မလဲ...လွဲလွဲကြီး လွမ်းနေရင်းနဲ့..သံသရာတစ်လျှောက် ဝေး ဝေးကြီးကို လွဲရဦးမယ်...။
ကံကြမ္မာကို မုန်းတယ်...။ အဆိပ်တစ်ခွက် ခဏပေးပါ ခရမ်းရောင်ရေ... လောင်ကျွမ်းပြာမကျသေးသရွေ့တော့ ညှိုးကြေနေရဦးမှာပေါ့.. အဟက်..! ဘာဖြစ်လဲ.. ဘာဖြစ်သွားလဲ ... ဘာဖြစ်ဖို့ရှိဦးမှာတဲ့လဲ... ။
ဆုတောင်းမမှားခဲ့ပါဘူး...ဆုတောင်းများခဲ့ရုံ သက်သက်ပါ...ခင်ဗျားအတွက်နဲ့ ကျုပ်အတ္တတွေကို တနင့်တပိုး ရေစက်ချလိုက်မိတာလည်း ပါမပေါ့..။ ခုမှတော့ သောက်နောင်တလည်း ရမနေချင်ဘူး..ရှိပါစေတော့ ရှိစေတော့..။
မုန်းဖို့ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်လို့ 'မုန်းပစ်လိုက်ပါ' ဆိုတဲ့ စကားကို ရနံ့ဟောက်ပက်နဲ့ မပြောစမ်းပါနဲ့ ....။
ဟာသပဲ..။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ခင်ဗျာ့အနားက ညှင်းသိုးသိုးလူတွေအားလုံး ဖြူဖွေးသန့်စင်သွားတဲ့အထိ ဟားတိုက်ရယ်မောပလိုက်ချင်တာ...! ဒါက သိုးမည်းပုရပိုက်မှာ စူးနေတဲ့ ကျိန်စာ ...(ခင်ဗျား မဖြစ်သင့်ဘူး)
သွားစမ်းပါတော့ .... အသည်းကွဲတာ မသေလောက်ပါဘူးတဲ့ ..သိပ်ဟုတ်တာပေါ့ ....
နာနာကျည်းကျည်း အလဲလဲအပြိုပြိုနဲ့ လူလိုသူလို ဖြစ်မနေတာကလွဲရင် သာမာန်ကာလျှံကာပါပဲ..။ ခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီး လမ်းလျှောက်ဖို့တော့ အချိန်နည်းနည်းယူရဦးမှာပေါ့လေ...။ ဒီထက်မပို မလိုဘူး..။ ဓါးနဲ့ထိုးခံလိုက်ရတဲ့ ဒါဏ်ရာကို အပ်စူးတာလောက်ပဲသိတဲ့ အကြင်နာမျိုးနဲ့ လာနှစ်သိမ့်နေတာဆိုရင်တော့ ခင်ဗျား ခပ်ဝေးဝေးမှာ ကျောခိုင်းနေတာ ပိုကောင်းလိမ့်မယ်..။
ဘာမှလည်း သောက်ကြီးသောက်ကျယ်တွေ မလုပ်ချင်ဘူး...။ အရာအားလုံးဟာ အံဝင်ခွင်ကျ လွဲချော်ခဲ့ပြီးသား မဟုတ်လား ..။ ရီမယ်ဆို ရီနေလိုက်လို့ရတယ်...။ စူးစူးဝါးဝါးနဲ့ အသံထွက်မလှတာတော့ နည်းနည်း သည်းခံပေါ့ဗျာ..။ နောက်တော့လည်း.. ဖာသိဖာသာ ဖြစ်သွားမှာပါ..။
ဂါထာဆန်တဲ့ စကားလုံးအချို့ နဲ့ ခပ်ပြတ်ပြတ် ညနေတချို့  ..မတော်တဆကျကျန်ခဲ့တာလွဲရင်.. အရာအားလုံးဟာ သာမန်ထက်လွန်ပြီး ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်..။
အလံဖြူပြပြီး နှုတ်ဆက်ဖို့တော့ မတောင်းဆိုပါနဲ့ . ခင်ဗျားအလိုက်သိရမှာ.. ဒီကြိုးဝိုင်းထဲ ၀င်လာကတည်းက အသက်နဲ့အသက်ကို လောင်းကြေးထပ်ထားခဲ့ပြီးသားဆိုတာ.. .!
အဟက်..! လူစွမ်းကောင်းကြီးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ..။ ဒါပေမယ့် သွေးပျက်စရာအရှုံးကိုတွေ့နေမှတော့ ကိုယ့်ရင်ကိုယ် ရွက်ကုန်ဖွင့်ပြီး မုန်တိုင်းကိုလည်း ပြေးဆောင့်ဖို့ ၀န်မလေးဘူးပေါ့..။ ဒီလိုပဲ ကျုပ်က တခါတခါ ၀တ်ကျေတန်းကျေ ရိုင်းတတ်တယ်..။
တောင်းပန်ရိပ်ညှိုးမျက်ဝန်းတစ်စုံနဲ့ တိမ်တိုက်ထဲတိုးဝင်သွားတဲ့ လေယဉ်.....ဘယ်လို ဂတိဂ၀တ်နဲ့မှ မချုပ်နှောင်ခဲ့ဘူး ..... ဒီလိုချစ်ခြင်းမျိုး ဘယ်ခေတ်မှာမှ ပွင့်ဖူးတော့မှ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ထပ်ခါထပ်ခါ နားလည်ရင်းနှဲ့ရှတတ အဲဒီနေ့မှာမှ မိုးမိခဲ့တယ်.. သိပ်တော့ မဆန်းဘူးလေ...။
သေချာတာတော့ သေနေတော့ လမ်းပဲ..။ မသေမချင်းတော့ သေအောင်ဆက်လျှောက်ရဦးမယ်..။ ကျုပ် ရာဇ၀င်တစ်ခုလုံး 'အုန်း' ခနဲ ပြိုကျတဲ့အထိပေါ့..။.
summer way [August4f*ckin2010]
Labels: s u m mer p oem
s u m mer p oem (13) summerwayy (12) ခံစားမိသမျှ (16) မြတ်မြတ်နိုးနိုး ကဗျာ (16) မြန်မာ (3) ရင်ဘတ်ဖြင့်သာ နားဆင်ပါ (6) မေမေ (1)
သွားလည်ဖြစ်နေကျ Blog လေးတွေ